Nivoaka iny ny vokatra ofisialy ary samy nandray ny andraikiny ny rehetra isan-tsokajiny sy ambaratongany, hoy izy. Hisaorana daholo ny CENI, ny SRMV, ny fokontany sy ny rehetra. Toy izany koa ny HCC. Amin’ny maha tany tan-dalàna dia hita ho nazava tao anaty kabarin’ny filohan’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ny fifanojoan’ny ara-dalàna sy ny rariny ary ny hitsiny. Hiditra fihodinana faharoa isika izao ka tsara raha jerena ny ahafahana manitsy ny lesoka. Anisan’ny goavana tokony hahitsy ny lafiny fanabeazana, voizina ny fitandroana mandrakariva ny soatoavina. Miarahaba azy mirahalahy izay hiatrika fihodinana faharoa ny tenako, hoy izy, ary miantso azy ireo ho raiamandreny ka hiezaka hanabe ny mpomba azy dieny izao sy mandritry ny fampielezankevitra sy ny fifidianana ary aorian’izany. Tsara apetraka ny fanontaniana hoe toy ny mpirahalahy ve ny fifandraisan’ireto kandida ireto ? Raha izay dia tokony hahatsiaro izany izy ireo fa mpiray tampo. Toy ny raiamandreny sy zanaka ve ? Raha izay dia tokony hihevitra kosa fa mpianaka. Izany hoe tokony hipetraka amin’izy ireo hatrany, hoy ity mpahaifiarahamonina ity, ny soatoavina hoe “Ny maharesy tsy hobiana, ny resy tsy akoraina”. Manomboka ny 5 desambra izao moa, raha ny voambara, no hivory hijery akaiky ny raharaham-pirenena mandritra ity fihodinana faharoa ity ny CFM.